Pachinko mpivarotra latabatra hisafidy tamin'ny fotoana nisokafan'ny
トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Pachinko mpivarotra latabatra hisafidy tamin'ny fotoana nisokafan'ny
Ary amin'ny andro voalohany fanoloana Xintai, ny tahirin-kevitra dia tsy misy ihany koa, satria ny fanjakana vaovao tsy misy, ny Neraiuchi hisafidy ny sehatra dia zavatra sarotra. Xintai ny andro voalohany, dia tsy midika fa ny misokatra amin'ny maraina, dia ho avy rehefa misokatra ny polisy dia nidina sitraka. Noho izany antony izany, ao amin'ny tsy hanadio ny fanokafana ny fotoana, matetika isika pachinko parlors ianao loteria. Ankoatra izany, arakaraka ny fomba loteria, mariho tsara fa misy ihany koa ny raharaha na ny hira izay Xintai Tsy fantatro.
Xintai ny fanoloana andro voalohany, satria tsy misy fotoana ampy mba hamaky ny fantsika iray manontolo, dia avelao ny fizarana izay mba hijery, ianao koa mba efa afa-tsy ny zava-misy fa ny fanombohan'ny fantsika ny foitra. Mazava ho azy fa raha efa nanangona ny antontan-kevitra ao amin'ny antontan-kevitra toy izany Robo toerana Fito, ny onjam-Horukon toerana sy ny ROM koa ndeha tafiditra ao.
Na izany aza, mijery ny fantsika fanitsiana, mba hisarihana mpanjifa, dia Xintai fanoloana andro voalohany dia ny tsara indrindra fantsika mamy.
ho Horukon napetraka sy ny fantsika fanitsiana ny Xintai Misokatra ny andro voalohany no tsara indrindra, misy fironana mankany mba hanenjanana kokoa azy isan'andro. Mazava ho azy ihany koa dia miankina amin'ny fivarotana. Hatramin'ny andro voalohany, ny vahiny ihany koa ny manangona Ilaozy miala aho, fivarotana sasany mba hamela ny fanafahana tsikelikely sitrana, dia misy ihany koa ny fivarotana avy tamin'ny andro voalohany, satria Te-laharana eo amin'ny fiantraikany. Ity no faritra, ny fironana ny momba ny herinandro taorian'ny fanokafana indray avy hatrany dia ho tsara kokoa ny maso foana isan'andro.
ny fotoana nisokafan'ny no izy, toy ny amin'ny gara fivarotana, satria dia antenaina fa mpanjifa maro fitohanana, dia mialoha ny mialoha fisafoana, ary mikendry latabatra avy teo aloha andro ny fanamarinana ny antontan-kevitra toa tsara olona izay efa nianatra ny lafiny sasany .